स्वदेशमा एजेन्टले इज्जत लुट्यो, विदेशमा साहुले शरीर
राेजगार समाज प्रवास समाचार
घरेलु कामदारका पीडा
रमेश भारती काठमाडाैं, १२ साउन
सुनकाेसीको भेलले ६ वर्षअघि बुबालाई बगाएपछि आमा र २ जना भाइ पाल्ने जिम्मा काभ्रेकी कल्पना मगर (नाम परिवर्तन) को काँधमा आयो । उनले २ वर्ष काठमाडौंमा नुन पोका पार्ने र अन्य क्षेत्रमा पनि काम गर्दै भाइलाई पढाइन् ।
घरपरिवार र भाइलाई पढाउन खर्च बढ्दै गएपछि कल्पनाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने निर्णय गरिन् ।
कल्पना सिन्धुलीका राजबहादुर तामाङमार्फत साइनो म्यानपावरबाट साढे ४ वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि लेबनान पुगेकी हुन् । उनलाई सिन्धुलीका एजेन्ट तामाङ र म्यानपावरले झुक्याएर साइप्रस भनेर लेबनान पुर्‍याए ।
‘नेपालमा काम गर्दा ५ हजारभन्दा धेरै कमाइ हुँदैन । विदेश जाँदा छोरी मान्छेले धेरै समस्या भोग्नुपर्छ । विदेशमा पैसा कमाइ भए पनि अरु कुरा बाध्यताले गुमाएर स्वदेश फर्कनुपर्छ,’ उनले भनिन, ‘दिल्लीबाट एजेन्टले साइप्रसमा होइन, लेबनानमा राम्रो कमाइ हुन्छ भनेर लेबनान पठायो । विदेश जाने राम्रो ज्ञान नहुँदा एजेन्टले फसाउँदा रहेछन् । एकातिर पैसा फस्छ भने अर्कोतिर कहाँ पुगिन्छ, थाहै नहुँदाे रहेछ ।’
वैदेशिक रोजगारीमा जाने बेलादेखि नै महिला कामदारले समस्या भोग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विदेश त विदेश नै हो तर, स्वदेशमै महिलाले धेरै समस्या भोगेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको कल्पनाको अनुभव छ ।
एजेन्टले इज्जत, साहुले शरीर लुटे
लेबनानमा कल्पनाले काम खासै धेरै गर्नु पर्दैनथ्याे । बेलुकाको खाना, घर सरसफाइ र कपडा धुने काम मात्र थियाे । काम थोरै भए पनि मालिकले धेरै मानसिक र शारीरिक पीडा दिने गरेको कल्पना बताउँछिन् ।
लेबनानमा भोगेको पीडा स्मरण गर्दै उनी भन्छिन्, ‘लेबनानमा होटल मालिकको घरमा काम गर्नेमा परेँ । साहु हरेक मध्यरातमा मातेर आउँथ्यो र सबै कपडा खोलेर अगाडि उभिन लगाउँथ्याे । त्यति मात्र कहाँ हो र ! नाङ्गै बनाएर अंगअंगमा रक्सी छर्किँदै हरेक रात ममाथि नाच्थ्याे ।’
कल्पना भन्छिन्, ‘मैले काम गर्ने मालिकको सामान्य होटल थियो । तर, उसको आफन्त पुलिसमा ठूलो मान्छे थियो । बेलाबेलामा पुलिसको भ्यान नै लिएर घरमा आउँथ्यो । भागिस् भने तँलाई जेल हाल्छु भन्दै धम्क्याएर ४ वर्ष राख्यो । मसँग साथमा भएको राहदानी खोसेर मालिकले लग्याे ।’
विदेशको ठाउँ, कल्पनालाई केही थाहा थिएन । भाग्न खोजे पनि सम्भव नभएका कारण जस्तोसुकै पीडा पनि सहेर बस्नुकाे विकल्प उनीसँग थिएन ।
उनी भन्छिन्, 'विदेशमा गर्न पनि के नै सकिन्छ र ? मालिकले जेजे गरे पनि सहेर बस्न बाध्य थिएँ । मालिक आउँथ्याे, अनि उसलाई मन लागेजति सबै गर्थ्याे र गरिदिनु पनि पर्थ्याे । प्रतिवाद गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । घरमा मालिक र म मात्र थियौँ । त्यही भएर चुपचाप उसले भनेको मान्नुपर्ने बाध्यता थियो ।’
कल्पनाका अनुसार लेबनानमा परिवारलाई बाहिर राखेर घरमा काम गर्नका लागि विदेशी केटी राख्ने चलनजस्तै छ । त्यहाँ सरकारी जागिरे, व्यवसायी, पुलिस र आर्मीले छोराछोरी र श्रीमतीलाई विदेश या बाहिर राखेर घरमा चाहिँ काम गर्ने विदेशी केटी राख्छन् । सरकारले यस्तो अधिकार पनि दिएको हुँदाे रहेछ ।
कल्पनाका मालिकका श्रीमती र छाेराछाेरी इजरायलको सिमानामा बस्दै आएका थिए । महिनामा एक पटक परिवार भेट्न जाँदा भाग्छे भनेर सँगै लिएर जाने गरेको उनले बताइन् । लेबनानमा घरभित्र काम गर्दा धेरै घरेलु समस्या भोगेर आएको उनको भनाइ छ ।
कल्पना भन्छिन्, ‘पैसा कमाइ त राम्रै थियो । तर, धेरै ठूलो चोट बोेकेर स्वदेश फर्कनुपर्‍यो । विदेशबाट फर्किएका महिलाको बाध्यता र समस्या हाम्राे समाजले बुझ्दैन । त्यही भएर विदेशबाट फर्किएपछि गाउँ जान सकेकी छैन ।’
उनी भन्छिन्, ‘देशमा रोजगारी नपाउँदा विदेश काम गर्न बाध्यताले जानुपर्छ । पैसा कमाउने आसमा धेरै वर्ष विदेशमै बित्छ । एकातिर स्वास्थ्य र अर्कोतिर शारीरिक यातना सहेर काम गर्नुपर्छ ।’
अर्काकाे देशमा त शरीर लुटेलुटे, राेजगारीका लागि महिला कामदार विदेश पठाइदिने एजेन्टसमेतले सुरुमै इज्जत लुटेर मात्र विदेश पठाउने गरेकाे कल्पनाकाे भाेगाइ छ ।
उनी भन्छिन्, 'परिवार र आफ्नाे भविष्य राम्राे पार्ने सपना बाेकेर या घरायसी बाध्यताले विदेश जाने हामी महिला कामदारकाे इज्जत लुटिने क्रम स्वदेशबाटै सुरु हुन्छ । आफ्नै देशका दाजुभाइले त यस्तो गर्छन्, विदेशी नागरिकलाई अरु देशका महिलाको के दयामाया र ?'
कल्पनाले रोजगारीका लागि लेबनान जाँदा एजेन्टलाई ८० हजार रुपैयाँ बुझाएर गएकी हुन् । लेबनानमा साढे ४ वर्ष बस्दा गरेकाे कमाइले धुलिखेलमा चार आना घडेरी जोडेर २ जना भाइलाई पढाएको बताइन् ।
उनले ८ कक्षासम्म मात्र अध्ययन गरेकी छन् । विदेश जाँदा कामभन्दा धेरै भाषा आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । काम अरुले गरेको देखेर जानिन्छ । तर, भाषा नजान्दा धेरै ठूलो समस्या आफूले भाेगेकाे उनी बताउँछिन् ।
लेबनानमा काेभिड– १९ को संक्रमण फैलिएपछि कल्पनालाई मालिकले नै स्वदेश पठाएको हो । एजेन्टमार्फत लेबनानमा पुर्‍याइएका धेरै महिला कामदार समस्यामा परे पनि स्वदेश फर्किने अवस्थामा नरहेको उनले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार लेबनानमा १० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार रहेको सरकारी तथ्यांक छ । त्यहाँ पुगेका महिला कामदार धेरै समस्या भोगेर काम गर्न बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला कामदारसँग राहदानी नहुँदा स्वदेश फर्कन नसकी रोगारदाता देशमै काम गर्न बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारीमा ९ लाखभन्दा धेरै महिला कामदार कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, १२ साउन २०७७, ०७:४४:००